सेरोफेरो : यो पोखरा, त्यो पोखरा
यो पोखरा, त्यो पोखरा
पहिलाका घरहरूलाई रूखले छेक्थे  । अहिलेचाहिँ घरहरूले रूख मात्र होइन, हिमालै छेक्ने भइसकेका छन्  ।
सुन्दरताको नाममा कसरी कंक्रिटको सहर बन्दै गयो पोखरा भन्ने फरकपन झल्काउने पुस्तक ‘पोखरा ः हिजो र आज’ बजारमा आएको छ । विसं २०१० को दशकदेखि हालसम्मका तस्बिरहरू यस पुस्तकले समेटेको छ । पाँच दशकअघिदेखि क्यामरासँग रमाउन सुरु गरेका पोखरा निवासी विश्व शाक्यले पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका हुन् ।
नयाँ पुस्तालाई पुरानो पोखराको बारेमा जानकारी दिने अनि पुरानो पुस्तालाई आफू विगतमा हुर्केको पोखराको सम्झना पुस्तकले दिलाउनेमा शाक्य आशावादी छन् । ‘विकासका नाममा सुन्दरतामाथि थोपारिएको विकृतिबारेमा सचेत गराउने मेरो सोच हो,’ शाक्यले भने । पोखराको परिभाषालाई फेवाताल र लेकसाइडको परिधिमा मात्र घेराबन्दी गर्ने चलन धेरै छ । फेवातालसँगै संरक्षणको चुनौती खेपिरहेका लेखनाथका बेगनास, रूपा, न्युरेनी, दिपाङ, गुँडेजस्ता तालको पनि सहर हो पोखरा भन्ने पुस्तकले देखाउँछ ।
अहिले मोबाइलबाट तस्बिर खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा धुलाउने जमाना आएको छ । तैपनि फोटो पुस्तक प्रकाशित गर्ने सोच कसरी आयो त ? प्रश्न सुनेर उनी हाँसे, ‘एक दशक अघिदेखि मैले पोखरा ः हिजो र आज भन्ने फोटो स्तम्भ स्थानीय पत्रिकामा चलाउँथें, त्यसले तस्बिर संकलन गर्ने र प्रकाशित गर्ने सोच पलायो । संग्रह पनि हुन्छ अनि हात राखेर हेर्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ भन्ने सोचें ।’ विदेशीहरूमाझ पोखराको पर्यटन प्रचार गर्ने मनसायले पुस्तकमा अंग्रेजी र नेपाली दुवैमा भाषामा तस्बिरहरूको वर्णन गरिएको छ । डाक्टर हर्क गुरुङसहित दुई दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशीले खिचेका तस्बिरहरू पनि समावेश गरिएको छ यो पुस्तकमा । चार सय हाराहारी तस्बिर रहेको यो पुस्तकमा उनी आफैंले खिचेका तीन सयभन्दा बढी उहिले र अहिलेका पोखराका तस्बिरहरू छन् ।
लेखनाथ शिशुवाका आँगनबाट कसरी धानका फाँटहरू बिलाए ? भैरवटोल, रामकृष्णटोलको आफ्नोपन कसरी मासिँदै गयो ? बिन्धवासिनी मन्दिरमा थुपारिएका संरचनाले कसरी त्यसको सुन्दरतालाई चुनौती दिइरहेको छ ? ठूलो एकादशीमा गरिने तोरण यात्रा, बाघजात्रा, भैरवनाच, सहस्रधारा माघेजात्रा, खैंजडी मुजुरासँगै गाइने भजनकीर्तनसँगै उबेला अत्यधिक चलनमा ल्याइने डोको, डालो, थुन्से, मान्द्रोहरू के पोखराले बिर्संदै त छैन ? पुस्तकमा अटाएका तस्बिरहरूले यस्ता हजारौं प्रश्नको तोप बोकेर उभिएजस्तो लाग्छ । आधुनिकताको पर्खालले मौलिक पहिचान छेक्न हुन्छ कि हुँदैन ? उत्तर पोखराले पक्कै खोज्नेछ भन्नेमा शाक्य आशावादी छन् ।
लेखक भवसागर घिमिरेप्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:४२https://www.kantipurdaily.com/koseli/2019/05/25/155876025396147694.html
भवसागर घिमिरे म मनबाट चलेको छु मस्तिष्कबाट चलेको छैन त्यसैले मलाई म मन पर्दैन पहिला पहिला मेरा मनहरु नसा नसाबाट बग्दै मस्...
Blog Archive December 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) January 2019 (1) September 2018 (1) August 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (1) February 2018 (4) December 2017 (4) October 2017 (1) September 2017 (3) June 2017 (1) April 2017 (1) December 2016 (1) November 2016 (2) October 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (1) June 2016 (1) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) December 2015 (6) November 2015 (5) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (1) June 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (2) February 2015 (1) August 2014 (2) June 2014 (3) February 2014 (1) January 2014 (2) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (4) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (7) January 2013 (2) August 2012 (1) May 2012 (3) December 2011 (3) November 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (6) June 2011 (2) May 2011 (4) April 2011 (2) March 2011 (7) February 2011 (9) January 2011 (13) December 2010 (2) August 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) October 2009 (1) September 2009 (6) August 2009 (1) July 2009 (6) April 2009 (5) March 2009 (35)
कपिलवस्तुमा वन्यजन्तुलाई बढ्दो सकस